७८ प्रतिशत मानिसले गर्छन् राति सुत्दा यी गल्ती, जसले हुनसक्छ यस्तो खतरा – List Khabar
Home / जीवनशैली / ७८ प्रतिशत मानिसले गर्छन् राति सुत्दा यी गल्ती, जसले हुनसक्छ यस्तो खतरा
७८ प्रतिशत मानिसले गर्छन् राति सुत्दा यी गल्ती, जसले हुनसक्छ यस्तो खतरा
admin October 9, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 57 Views
काठमाडौँ । मान्छेलाई निन्द्रा नभई नहुने हो । त्यसैले भन्ने पनि गरेका छन्, मान्छेले आधा जीवन त सुतेरै बिताउँछ । तर निन्द्रा गहिरो र आरामदायी भने हुनुपर्छ । नत्र स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ भने हाम्रो दैनिकीमा समेत खटपट हुन्छ । एक अध्ययन अनुसार विश्वमा ३९ प्रतिशत मानिस मात्रै आरामसँग सुत्ने गरेका छन् ।
२२ प्रतिशत मानिस रातको समयमा राम्रोसँग सुत्न सक्दैनन् भने ४७ प्रतिशत मानिस तनावकै कारण सुत्न सक्दैनन् । तर धेरैजसो आफ्नै गल्तीका कारण मानिसहरु आफ्नो निन्द्रा सुरक्षित बनाउन सक्दैनन् । तल हामीले त्यस्ता केही कारणहरु उल्लेख गरेका छौँ । ती बानी तपाईमा छन् भने तुरुन्त हटाउनु होला ।
१.राति कफी पिउने
तपाई सुत्नु भन्दा अगाडि कफी कदापि नपिउनुहोस् । कफिन आफैमा उत्तेजक पदार्थ भएकाले अलि कडा कफी खाएर सुत्दा सुताईको न्युरो ट्रान्समिटरलाई अवरोध गरिदिन्छ र इन्सोमेनिया निम्त्याइदिन्छ । पकाएको चिनीले पनि सुत्ने समयमा हर्मन नियन्त्रण गर्ने अंगलाई दबाब दिन्छ जसका कारण तपाईलाई रातभर निन्द्रा नआउन सक्छ ।
२. पाल्तु जनावरसँग सुत्ने
एउटा अध्ययनले देखाए अनुसार पाल्तु जनावरलाई सँगै राखेर सुत्ने मानिसहरुमध्ये ६३ प्रतिशत मस्तसँग सुत्न सक्दैनन् । त्यसैले सुत्दा जहिले पनि पाल्तु जनावरलाई सँगै राखेर नसुत्नुहोला । ती जनावरको र्याल र अन्य रोग मानिसमा सर्ने भएकोले पनि सँगै सुत्नु निन्द्रा मात्रा नभई स्वास्थ्यको हिसाबले पनि उचित नहुने स्वास्थ्र्कीहरु बताउँछन् ।
तपाईले मध्य रातमा अलार्म लगाउने गर्नु भएको छ रु त्यो बानी हटाउनुहोस् । कतिपयले अलार्म लगाएर मध्ये रातमा निन्द्राबाट ब्युतिएर आफ्नो काम सकेर फेरि सुत्ने गर्छन् । तर यसो गर्दा स्वास्थ्यमा गम्भिर असर गर्छ । यसो गर्दा दिउसोभर कमजोर अनुभव समेत हुन्छ । त्यसैले मध्य रातमा अलार्म नलगाउनुहोस् । बरु ठीक उठ्ने समयमा मात्र अर्लाम लगाउनुहोस् । सकभर आफैं ब्युतने प्रयास गर्नुहोला ।
४.अत्यधिक मदिरा सेवन
कोहीले अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने सुत्ने गर्छन् । मदिरा सेवन गरेर सुत्दा निन्द्रा नलाग्ने होइन । तर, यसरी सुतेमा बेहोसमा ढले जस्तो हुन्छ र भोलिपल्ट टाउको गह्रोङ्गो हुन्छ । मदिरा सेवन गरेर सुत्दा प्राय मानिसले सपना देखिदैन् भन्छन् । यही कारणले नदेख्ने बताइन्छ । एक युनिट मदिरा प्रोसिस गर्न शरिरलाई सामान्यतया १ घन्टा लाग्ने गर्दछ । सुत्ने बेलामा बरु मदिराको सट्टा हर्बल टी सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ ।
५. बेडमा प्रविधिको प्रयोग
७८ प्रतिशत मानिसले स्मार्ट फोन, ट्याबलेट, ल्यापटप आदिको प्रयोग गर्छन् । तर, त्यस्ता उपकरणहरुबाट उत्पादन हुने निलो प्रकाशले सुत्नका लागि सहयोग गर्ने हर्मन मेलाटोनिन उत्पादन गर्न ढिलाइ गर्छ । कतिपय अवस्थामा उत्पादनै गर्दैैनन् । तसर्थ बेडमा जाने बेलामा त्यस्ता सामान टाढा र बन्द गरेर राख्नुस् ।
६.टेलिभिजन खोलेर सुत्ने
३८ प्रतिशत मानिसहरु बेडमा सुतेरै टेलिभिजन हेर्ने अध्ययनले देखाएको छ । तर, टेलिभिजन खोलेर सुतेमा भोलिपल्ट बिहान ढिलो उठिने त हुन् नै निन्द्रामा पनि असर पुग्छ । कहिलेकाही टिभी हेर्दाहेर्दै बत्ति गएमा तपाईले बिर्सेर बत्तिको स्विच बन्द गर्न बिर्सनु भयो भने मध्यरातमा बत्ती आउँदा निन्द्रा झनै झस्किन सक्छ ।
नोट : साथै तपाईहरुलाई हाम्रो प्रेरक जानकारी कस्तो लाग्यो ? यदि हाम्रो यो जानकारीले अरुको जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याओस भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो लेखलाई शेयर गर्दिनुहोला । तपाइको एक शेयरले थाहा नभएका हरुले ज्ञान पाउनेछन् भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।
Previous युवतीले शारीमा जिम्न्यास्टिक गरेको भिडियो भाइरल, को हुन् उनी ? (भिडियो सहित)
Next मन्त्री बनेलगत्तै रामकुमारी झाँक्रीले जनाइन् यस्तो प्रतिवद्धता